Bezlya Dolls - 100% Wakiilka Rasmiga ah - Urdolls
The caruusadda galmada Bezlya waxay leedahay nooc cusub oo ah qalfoof dhan-bir ah.
Bezlya love doll waxay leedahay 11 midab oo maqaar ah, oo ay ku jiraan caddaan, dabiici, sarreen iyo madow. Lafaha iyo kala-goysyada caruusadaha jilitaanka Bezlya waa lafo-istiraatiijiyad cusub oo dhan-biro ah. Kala-goysyada faraha iyo suulasha waxay aad ugu egyihiin lafaha aadanaha dhabta ah. Waad qaadan kartaa muuqaal kasta oo galmo ah oo aad qiyaasi karto. Siilka wuxuu ka samaysan yahay shey adag oo tpe ah, iridda ayaa cidhiidhi ah oo isafgarad leh, qaabka gudahana waa mid jilicsan. Waxay leedahay iskaanka 163s 3D 1: 1, kaas oo si sax ah ula mid ah qofka dhabta ah. Tikniyoolajiyadda asalka ah ee xuubka gudaha, kaliya dhowr dhibic oo biyo ah ayaa geli kara xubinta taranka, xubinta taranka haweeneyda ayaa si otomaatig ah u qoyneysa isla markaana la cayaaraysaa saameyn ku dhalashada. Khibrada waa mid dhab ah.
Brand:Bezlya Dolls Xigasho ：Shiinaha
Waxyaabaha: Dolls Galmo Jinsi ah Style: Silsilado FLORID, Bisayl, DHALINYARADA, mataano, Jiilaal, iyo wixii la mid ah.
Hordhac ： Bezlya caruusad jinsi waa doll adag oo jinsi ah oo dhadhan la'aan, saliid yar, iyo iftiin leh. Qalabka ugu weyn ee caruusadda galmada waa TPE laga soo dhoofiyo Japan, taas oo aan sun lahayn oo aan dhadhan lahayn, waxayna ku dhowdahay taabashada maqaarka aadanaha ee dhabta ah. Caruusadaha galmada ee nolosha ka muuqda waa kuwo tayo sare leh waxayna leeyihiin qaybaha isku imaatinka ugu fiican. Waad qaadan kartaa muuqaal kasta oo galmo ah oo aad qiyaasi karto.
145cm Bezlya Doll
148cm Bezlya Doll
158cm Bezlya Doll
160cm Bezlya Doll
163cm Bezlya Doll
168cm Bezlya Doll
168cm F-cup Begonia Maqaarka Bezlya Dolls
163cm B-cup maqaarka mert myrtle Bezlya Dolls
158cm D-koob Maqaarka Freesia (Nooca Remlam) Bezlya Dolls
158cm D-cup Yuriko Maqaarka Universal (Nooca Remlam) Bezlya Dolls
148cm bodybuilding C-cup freesia skin (nooca remlam) Bezlya Dolls
148cm bodybuilding C-cup Yuriko maqaarka caalamiga ah (nooca remlam) Bezlya Dolls
163cm B-cup Ziyang Pu Maqaarka Bezlya Dolls